Maalinta: 18-ka July, 2017
Seminar loogu talagalay Wadayaasha ka socda Degmooyinka Van Metropolitan: Degmadda Van Metropolitan County waxay qabanqaabisay aqoon-isweydaarsi ku saabsan qawaaniinta isgaarsiinta iyo qiimaha dharka darawalada gaadiidka dadweynaha. Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa adeegyadeeda ku-saleysan muwaadiniinta. Waaxda Gaadiidka, [More ...]
Aragtida 5 bin naafada oo aan la seexin qalabka isha si loo qaybiyo
5 Bin aragga naafo ah ee aragga indhaha ayaa loo qeybinayaa si lacag la’aan ah: Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa sheegay in Qandaraaslaha Mashruuca Mashruuca Gören Eye uu fulinayo Agaasinka Guud ee Isgaarsiinta ayaa la saxeexi doonaa berri shaqooyinka ayaa la bilaabi doonaa, [More ...]
Ma Ka Shaqeeyaan Magaaladda Istanbul? : Guddoomiyaha AKOM Vasip Sahin iyo Madaxweyne Kadir Topbas, musiibada ka dhacday Istanbul, oo wax ku ool ah heerka masiibo ee meelaha qaar roobabku si dhakhso leh u sharaxeen. Tilmaanta AKOM [More ...]
400 milyan oo doolar oo logistics xarunta loogu talagalay "Silk Road": Silk Road, oo isku xirta Yurub iyo Aasiya kumanaan sano ka hor, ayaa mar kale nolosha yimaada. Mashruuc cusub oo silk, waddo tareen xawaare sare leh, garoomada diyaaradaha, [More ...]
Isku-darka Isku-xirka Heerka Xadka ee Malatya
Qabanqaabinta Isugeynta Heerarka Isgoysyada ee Malatya: Malatya Metropolitan Municipal 2 ee shirkii Caadiga ahaa ee Luulyo. fadhi ayaa la qabtay. Kulamada dhexdeeda, dhibaatooyinka ka jira isgoysyada oo ay ugu wacan tahay khadka tareenka Malatya-Sivas Railway oo kala goynaya xaafadaha Topsöğüt iyo Yeşiltepe [More ...]
Wax ka badalida Xeerka Diiwaangelinta iyo Diiwaangelinta Gawaarida Tareenka: Gawaarida tareemada ee magaalada hareeraheeda ah ee ka shaqeeya qaab gaadiidka dadweynaha ee tareenka magaalooyinka inkasta oo ay ka shaqeynayaan shabakada kaabayaasha wadooyinka tareenka, [More ...]
Gawaarida Eurasia ayaa xiran yihiin saldhigyada mitiraha ee Istanbul
Tunisyada Eurasia Tunnel ayaa ku xirmay magaalada Istanbul, saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa ku fatahay: Istanbul waxaa la ciir ciiraysa gaadiidkii magaalada oo idil sababtuna waa roobabkii xagaaga ee aadka u xumaa sanadihii la soo dhaafay. Daawada Eurasia Tunnel ee magaalada Istanbul, halkaas oo roobab culus ay wax ku ool yihiin [More ...]
TÜVASAŞ ugu Dugsiga Sare ee 40 Hab-qorista bilaabaa: Turkey baabuur Industry xaaqiijiyay ee la soo dhaafay by tiro badan oo ah maalmaha engegan oo war qoraal ah oo lagu daabacay waafaqsan qorista waxaa la qaban doonaa. Intaa waxaa dheer, murashaxiinta ayaa leh ugu yaraan [More ...]
1 dhintay ayaa waxaa ku dhacay jidka tareenka ee Kutahya
Gawaarida Kütahya Raybüsle 1 Qof ayaa dhintay: Wadooyinka tareenka ee Kütahya-Eskişehir ayaa ku dhacay gaariga isgoyska heerka. Emine Özdemir ayaa lagu dilay baabuur lagu jiiday hortiisa tareenka qiyaastii 100 mitir markii uu shilka galay. [More ...]
IZDENİZ ayaa weeraray IZBAN iyo ESHOT
Shaqo joojinta İZDENİZ waxay kicisay İZBAN iyo ESHOT: Shaqo joojinta waxay ku bilaabatay is afgaranwaaga u dhexeeya TDS iyo İZDENİZ AŞ, oo ka mid ah shirkadaha İzmir Metropolitan Dowlada Hoose, ayaa sii soconayay maalmaha 6. Turkey Ururka badmaaxyada (TDs) City Lines [More ...]
RayHaber 18.07.2017 Warbixinta Shirka
Si aad u hubiso amnigaaga navigga ee ku yaala xaafadda Aaden, dhismaha mesh mesh waxaa lagu iibsan doonaa Parabolic Sust (TULOMSAS)
Wasaaradda Macallimiinta waxbarashada Qaranka Codsiyada loo diro dibedda: Wasaaradda Tacliinta Qaranka ayaa u xilsaari doonta macallimiinta dibedda. Codsiyada xulashada macallimiinta lagu meelaynayo dibedda loogu dhigayo barashada luqadda ajnebiga ah ee MEB. Wasaaradda Waxbarashada Ingriiska [More ...]
Duqa magaalada YILMAZ: “Gaadiidka Dadweynaha Waa Bilaash Munaasibadda” Duqa magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz, oo ka hadashay shirka jaraa'id ka hor Ciyaaraha Olombikada Naafada ah ee 2017; “Munaasabadda furitaanka oo ay ugu wacantahay 18 Luulyo [More ...]
Digniinta Tamarta Sarre ee udhaxeysa Tavsanli iyo Degirmisaz oo ka yimid TCDD
Qoraalka qoraalka ah ee ay soo saartay TCDD, iyada oo lafiirinayo asaasida xarumo koronto oo loogu talagay qaybta khadka Eskişehir-Kütahya-Balıkesir; 19 Volt volt sare waxaa la siin doonaa 2017 laga bilaabo bisha Luulyo 27.500 illaa qadka tareenka ee u dhexeeya Tavsanli iyo Degirmisaz Stations. [More ...]